नाग पञ्पमी, गुरु पूर्णीमा, जनै पूर्णीमा रक्षा वन्धनको यस्तो कथा - MONGOL KHABAR
नाग पञ्पमी, गुरु पूर्णीमा, जनै पूर्णीमा रक्षा वन्धनको यस्तो कथा
बाहुनले मूलबासीको घरको ढोकाको माथि गाईको गोवरले नागको चित्र टास्ने, अनि द्रव्य पैसा, चामलले पोस्नु पर्ने दिन । तर अचम्म यो छ कि सर्प देखेपछि बाहुनले डरले सर्प रहेछ भन्दै उसको छेउ पर्दैन उल्टै भाग्छ । नाग भगवान भएपछि दुध पिलाउदै राख्नु पर्ने होइन र? अरुलाई भगवान भनेर नक्सा पुज्न लगाउनेले जमिनमा लडिरहेका वेवारिसे सर्पलाई उठाएर भगवान भनि पुज्नु प¥यो । घरमा लगेर संरक्षण गर्नु प¥यो । गाईलाई झैँ नाग भगवानलाई गरुडले खाई दिन्छ, गरुडबाट कानुन बनाएर रक्षा गर्नु प¥यो, नाग भगवानको । होइन भने मानिसलाई यसरी मूर्ख बनाउन पाइन्दैन ।
संस्कृत वा बाहुन शास्त्र अनुसार गुरु भन्नाले धार्मिक पुरोहित अर्थात ब्राह्मण भन्ने बुझिन्छ । गुरु भन्नु र मान्नु बाहुनलाई पूज्य मान्नु सर्वोच्चतामा राख्नु हो । गुरु पूर्णिमा भनेको बाहुनको पूर्णिमा हो ।
बाहुन क्षेत्री पूरुषले जनै(मुसल्मानी साम्राज्यमा गाईको आन्द्रालाई “जनेउ” भनिन्थ्यो र जनेउ बाट अप्रभ्रंश हुदै जनै भएको हो) फेर्ने वा लगाउने दिनलाई जनै पूर्णिमा भनिन्छ । जनै भिर्नेलाई तागाधारी भन्ने चलन छ । तागाधारी भन्नाले धागो काधमा भिर्ने चलनलाई बुझिन्छ । मूलबासी मंगोलहरु गैर तागाधारी हुन ।
जनैपूर्णीमाको दिन ऋषी डोरि अर्थात डोरा बान्ने चलन छ । काँधमा लगाउने तागा संगै हातमा ऋषि बान्ने एकाध आफ्नो पन भुलेर ऋषिडोरी बाँधेको देखिन्छ । ऋषिडोरा बाध्ने क्रममा बाहुनले भन्छ ः
“येन बद्धो, दान वेन्द्रो बलिराजा महाबलः
तेन त्वाम प्रतिबद्धमे नमो रक्षे, मा चल, मा चल माचल ।”
अर्थात यो डोरा र धागो तँलाई म यो उदेश्यले बाँधी दिँदैछु । जुन उदेश्यले तेरो राजा बलि राजालाई बाँधिएको थियो । आजबाट तँ मेरो दास होस् । मेरो रक्षा गर्नु, तेरो कर्तब्य हो । आफ्नो समर्पणबाट नहट्नु ।
बलिराजा आर्य होइनन् किनभने बलिराजा असाध्यै दानवीर राजा भनेर कहलिएको र बाहुन क्षेत्रीहरु यस्ता दानवीर हुदैनन् र लोभि हुने उनीहरुको शास्त्रले प्रमाणित गरेको हुँदा अनार्य हुन भन्नेमा विद्वान सहमत छन् । यसकारण वलिराजा अनार्यका पूर्वज हुन उनलाई बाहुनहरुले दानवीर भनि खुट्टामा लम्पसार पर्दा प्रभावित भइ आफ्नो राज्य समेत बाहुनहरुलाई सुम्पेर अन्तमा बाहुनले दास बनाएको थियो । यहाँहरु आफै भन्नुस तपाईले जनै पूर्णीमा (बाहुन क्षेत्रीबाहेक मंगोलहरुलाई बिशेष) कुन आधारमा मनाउनु हुन्छ रु रक्षावन्धन वा ऋषिडोरीले तिम्रो रक्षा गर्छ कि बाहुनको रक्षा गर्छ ?
आज मूलबासी मंगोलकै केहीले बाहुनसंग ऋषि डोरी बाँधेको देखियो । तर के बुझेर बाँधेका हुन ?
बाहुनको ठगिखाने भाडोलाई राज्यले एकपक्षिय रुपमा सार्वजनिक विदा दिनु उचित छ रु मुखमा धर्मनिरपेक्ष बगलीमा हिन्दुत्व रु जनैपूर्णीमा, गुरु पूर्णीमा, प रक्षा वन्धन भन्नु र बाहुन पूर्णीमा भन्नुमा फरक छैन त्यसकारण यसको नाममा विदा दिनु हुँदैन ।